I-china API610 OH2 Pump CMD Model abakhiqizi nabaphakeli | damei kingmech futha
Uhlobo lwe-CMD pump luphakathi nendawo-ifakwe isiteji esisodwa phezu kwephampu yokudonsa yokuphela eyenzelwe ngokuya nge-API 610.
Usayizi: 1-16 amayintshi
Amandla: 0-2600 m3 / h
Izinga lokushisa: -80-450 ° C
Izinto: Insimbi yensimbi, i-SS304, i-SS316, i-SS316Ti, i-SS316L, i-CD4MCu, i-Titanium, i-Titanium Alloy, i-Hastelloy Alloy
Amabanga wohlelo lokusebenza
Ngokupompa imidiya ehlanzekile, engcoliswe kancane, ebandayo, eshisayo, engathathi hlangothi noma enobudlova.
• Kuma-refineries, imboni ye-petrochemical, ukucubungula amalahle nobunjiniyela bokushisa okuphansi.
• Embonini yamakhemikhali, imboni yamaphepha, imboni ye-pulp, imboni kashukela kanye nezimboni zokucubungula jikelele.
• Emkhakheni wamanzi, izitshalo zokususa amanzi olwandle.
• Ekushiseni nasekupholiseni umoya.
• Izitshalo zamandla.
• Kwezobunjiniyela bokuvikelwa kwemvelo.
• Ezimbonini zemikhumbi nezasolwandle.
Amaphampu wesiteji esisodwa, enezingqimba, ehlukanisiwe, amapampu okufaka izigaxa ezinamamitha anezinyawo phakathi nendawo kanye nokungena okukodwa kwe-radial impeller, ukudonswa kwe-axially, ukukhishwa kwe-radial. Ngokuya ngezimo zokusebenza izimbobo zokulinganisa ze-hydraulic. Ikhava yokufaka ubucwebe ngokuxhuma kokupholisa noma kokushisa, ukubekwa uphawu kwe-shaft ngamaphakethe noma ngezimpawu zomshini zanoma iyiphi idizayini (ukusebenza okukodwa noma okuphindiwe), ukuxhumana kokupholisa, ukufutha noma ukufaka uketshezi uketshezi. Umsebenzi wepayipi omisiwe ngokwezinhlelo ze-API.
Ukupholisa kwesisekelo sepuleti lesisekelo kungenzeka. Ama-Flanges kungenzeka ngokwe-DIN noma i-ANSI. Ukucindezela okufanayo kokuncela nokukhipha ama-flanges.
Ukuqondiswa kokuzungezisa ngokwewashi kubonwe ekugcineni okuqhutshwayo.
I-1.Sulphric acid, i-nitric acid, i-hydrochloric acid, i-phosphoric acid ye-organic acid ne-inorganic acid lapho kushisa okuhlukahlukene nezimo.
I-2.Sodium Hydroxide, i-sodium carbonate ne-alkaline liquid emazingeni ahlukahlukene wokushisa nokuhlushwa.
Zonke izinhlobo zesisombululo sikasawoti.
Imikhiqizo yamakhemikhali e-4Various liquid petro, i-organic organic kanye nezinto zokusetshenziswa ezinokugqwala ezinemikhuba emihle kanye nemikhiqizo.
Njengamanje, izinto ezilwa nokubola zamaphampu ezinikezwe isitshalo sethu zingahlangabezana nazo zonke izidingo zento eshiwo ngenhla.
Sicela unikeze imininingwane yesevisi yemininingwane yepompo kithi, lapho u-oda.
I-1.Design kanye nokugcinwa okujwayelekile okuhambisana nomkhakha wenqubo kuqinisekisiwe. Ukuqaqa ngokushesha noma ukuhlangana. Ukuqaqa ngaphandle kokususwa komsebenzi wepayipi nomshayeli.
2.Ofly kuphela 7 ozimele ozimele for 48 osayizi. Ama-hydraulics afanayo (ama-impellers) namafreyimu athwala ngokuya ngochungechunge olulula noma oluphakathi lomsebenzi CHZ
3.Low igatsha velocity, ongaphakeme umsindo ezingeni. Ngenxa yezinyathelo ezengeziwe eziyinhloko ekuphepheni, impilo ende elinganisiwe yamakhasethi.
4.Casing ngokuhlanganyela ngeke aphule. Ukuhambisana kahle kwezimo zokusebenza ezahlukahlukene, impeller evaliwe ngokusebenza kahle okuphezulu, i-NPSHR ephansi
5.Optimum ukuhambisana nemibandela ehlukahlukene yokusebenza, impeller evaliwe ngokusebenza kahle okuphezulu, i-NPSHR ephansi.
Lapho izindandatho zokufaka ikhebula nokufaka impelezi kungagqokwa, ikhebula, impeller kanye ne-shaft kungasetshenziswa futhi .Izindwangu ezincane zokufaka ikesi nezindwangu zokufaka impeller ngenxa yokungabikho kokuqina.
7.Stable, ukuqondanisa shaft isikhundla, shaft eyizingqabavu nge shaft deflection encane, izingxenye ezimbalwa .Zimbalwa eziletha amasheke adingekayo .Akukho kupholisa ipayipi lamanzi
Ukwethembeka okuphezulu futhi ngokushintshanayo .Short shut-shut .Low izindleko zesondlo
Izinto ezimbalwa, ukugcinwa kwesitokwe okuyingxenye yezomnotho, izindleko zokugcina isitoko esiphansi.
Impilo engu-3.Long elinganisiwe yamabhere we-antifriction, impilo ende elinganisiwe yezimpawu ze-shaft, isikhathi esifushane sokuvala-, ukulungiswa okuphansi kubiza ukusebenza kahle, ukusebenza okuphansi
4. Izindleko eziphansi zokusekelwa komsebenzi wepayipi nokuvikelwa komsindo, izindleko ezisezingeni eliphansi nezindleko zokulungisa, ukuthembeka okuphezulu.
Ukwethembeka okuphezulu kwamaphampu, izinkathi eziphansi zokugcina, izindleko zamandla aphansi ngenxa yokukhethwa ngokucophelela kwepompo. Izindleko zokutshala imali ezincane zezitshalo.
6. Ukonga okubonakalayo kokulungiswa kanye nezindleko zokugcina ingxenye yesitoko, izikhathi ezincane zokulungisa.
Impilo engu-7.Long elinganisiwe yokupakisha noma imishini yezimpawu. Ukuvala okufishane. Ukugcinwa okulula, izindleko zokusebenza eziphansi. Azikho izindleko zokutshala imali zohlelo lokupholisa.
Langaphambilini I-API610 OH1 Pump FMD Model
Olandelayo: I-API610 OH3 Pump GDS Model
I-API610VS6 Pump TDY Model
I-API610 BB3 (AMD) Pump
I-API610 OH1 Pump FMD Model